जहाँ अन्याय, अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता पुग्छन| Nepal Pati
जहाँ अन्याय–अत्याचार हुन्छ, त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता पुग्छन
- माधवकुमार नेपाल वरिष्ठ नेता, नेकपा
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनले जरो गाडेको छ । यसले जनताको विश्वास जितेको छ ।यसको पछाडि ऐतिहासिक कारणहरू छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात निकै ठूलो चुनौतीको बीचमा भएको थियो । जतिबेला राणा–शाहीको विगविगी चलिरहेको थियो । त्रास र आतंक व्याप्त थियो । तानाशाहको विरुद्धमा बोल्दा आजीवन कारावास र मृत्युदण्ड भोग्नुपथ्र्यो । त्यस्तो बेलामा जीवनको बाजी थाप्दै योद्दाहरू अगाडि बढ्नुभयो । २००६ साल बैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । हुनत नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सुरुवात पनि निकै ढिलो भएको छ । अरू देशहरूमा १८ औँ शताब्दीमै राजनीतिक दलहरू उदय भएको छ । प्रचण्ड गोर्खा र त्यसपछि प्रजा परिषद, नेपाली कांग्रेस हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भयो ।
नेपाली युवाहरू जो रुसी क्रान्ति र चिनियाँ क्रान्तिबाट प्रभावित भए । ती युवाहरूले नै अग्रसरता लिए । पाँच जना युवाले भारतको श्याम बजारमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । स्थापनादेखि नै नेकपाले लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष अगाडि बढायो । कम्युनिष्ट पार्टीको बैचारिक मान्यतालाई अगाडि सा¥यो । कम्युनिष्ट घोषणापत्रको अनुवाद पुष्पलाल आफैँले गर्नुभयो । बैचारिक चरणमा खडा भएको कम्युनिष्ट पार्टीले राणा शासन विरुद्दको आन्दोलनमा आफुलाई उभ्यायो । धेरै योद्दाहरू त्यतिबेला मुक्ति सेनामा सम्लग्न हुनुभयो । र, नयाँ इतिहासको सुरुवात गर्नुभयो । पछिल्लो समय किसान आन्दोलन, महिला आन्दोलन, कर्मचारी आन्दोलन हुँदै युवा–विद्यार्थी आन्दोलनमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्लग्न हुँदै गयो । नेपालको अनेक राजनीतिक घटनाक्रममा कम्युनिष्ट पार्टी सम्लग्न हुँदै आएको छ । त्यसै क्रममा २०१५ सालको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीले चार जना सदस्यसहित उपस्थिति देखायो । मधेसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी जनताको विश्वास जित्न सफल भयो भने काठमाडौँ उपत्यका र पश्चिम नेपालमा पनि आफ्नो हैसियत देखाउन सक्यो । कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरूमाथि प्रतिवन्ध लागेको बेलामा पनि निराश नभइ, हतास नभइ, आत्मसमर्पण नगरी योद्दाहरू अगाडि बढ्नुभयो । कम्युनिष्ट पार्टीले जनतासँग आफ्नो सम्बन्ध घनिभूत बनाउँदै गयो । यसैक्रममा को के (को–अर्डिनेशन केन्द्र), नेकपा माले भयो । विभिन्न समूहमा रहेका पार्टीहरू मिल्दै जाँदा नेकपा एमाले भयो । माओवादी पनि चौथो महाधिवेशन, एकता केन्द्र हुँदै अगाडि बढ्यो । २०७४ सालमा दुवै पार्टी एकतावद्ध हुने संकल्प ग¥यौँ । र पार्टी एकता घोषणा गरेर नेपाली जनतामा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन एकतावद्ध भएको सन्देश दिन सफल भयौँ ।
सर्वहारा वर्गको अगुवा दस्ता
कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्ने व्यक्तिमा तीन वटा कुराको आवश्यकता छ । पहिलो, देशभक्तिको भावना । दोस्रो, समाज परिवर्तन गर्ने संकल्प र तेस्रो, विकास, समृद्दि र सुशासन दिने संकल्प जरुरी छ । यी तीन भावना भएको व्यक्तिले मात्र कम्युनिष्ट पार्टीमा इमान्दार कार्यकर्ताको रुपमा आफुलाई उभ्याउन सक्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा क्रान्तिकारी भावना चाहिन्छ । स्वार्थी भावना बोक्नेहरू कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन् । व्यक्तिवादी भावना बोकेर कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी हुन सक्दैन । व्यक्तिवादी सोचलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो योग्यता र क्षमता बढाएर, मिहेनत गर्ने प्रवृति हुनुपर्छ । सर्वहारा वर्गको अग्रदल कम्युनिष्टलाई भनिन्छ । सर्वहारा वर्गको अगुवा दस्ता कम्युनिष्टलाई भनिन्छ । त्यो भनेको के हो त ? मजदूर मध्येको पनि सर्वहार वर्ग, सर्वहारा वर्गको पनि अगुवा दस्ता भनेपछि के–के आधारमा त्यो हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सवैभन्दा पहिला विचारको आधारमा हुनुपर्छ । संस्कार, दृष्टिकोण, चिन्तन, व्यवहार, कार्यशैलीको आधारमा हुनुपर्छ । देश र जनतालाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने आधारमा हुन्छ । साथसाथै प्रत्येक विषयमा दूरदृष्टि राख्न सक्ने हुनुपर्छ । यी सवै ज्ञान र खुवीको रुपमा अग्रदस्ताको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सवै हिसावले पछाडि प¥यो भने त्यो अगुवा दस्ता हुन सक्दैन ।
यसबीचमा निम्न पूँजीवादी प्रवृति हावी भएको छ । व्यक्तिवाद हावी भएको छ । स्वार्थी प्रवृति हावी भएको छ । मवादी प्रवृति हावी भएको छ । र अनेक विकृति र विसंगतिमा चुर्लुम्म डुब्ने प्रवृृति पनि देखा परेको छ ।
दुई पार्टी मिलेपछि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने दुवै पार्टी अगाडि बढ्दा हामीले के–के उपलब्धि हासिल ग¥यौँ त ? ती उपलब्धिहरू फेहरिस्त हामीले ल्याउनुपर्छ । हिजो हामीबाट के–के कमिकमजोरी भए, कस्ता विकृति, विसंगति हामीभित्र छन् भन्ने राम्रो विश्लेषण गरेर कमिकमजोरी सच्याउँदै धारिलो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र खराव आचरण भएकालाई प्रवेश गर्न दिनुभएन । यसरी अगाडि बढ्दा कसैले पनि कम्युनिष्ट पार्टीलाई पराजित गर्न सक्दैन । त्यो पार्टी नै समाजमा टिक्छ, जसले समाजको भावनालाई बुझ्न सक्छ । त्यो पार्टी मात्रै टिक्छ, जो जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन्छ, जो जनताको ढुकढुकी भएर बोलिरहेको हुन्छ । जनताको पीडामा रोइरहेको हुन्छ । जनताको सुःखमा हाँसिरहेको हुन्छ । जनताको प्यारो पार्टी बनाउन जनतासँगको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो बनाउनुपर्छ । पानी र माछाको जस्तो बनाउनुपर्छ । अहिले पनि नेपाली समाजमा जहाँजहाँ अन्याय, अत्याचार हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू पुग्छन । समाज र राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँछन । निराश हुनेको आशाको केन्द्र बनिरहेका हुन्छन । जनताको आँखाको नानी बनिरहेका हुन्छन । यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आन्दोलनको नेता भएर जनताको अगुवा भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्वलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन ।